သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: ကာဗွန်သံမဏိ: ASTM A234 WPB, A234WPC, Q235,10 #, သံမဏိ: ASTM / ASME A403 WP 304-304L-304H-304NN-304LN; ASTM / ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316TN-316TN-316TN-316LN-316TN; / ASME A403 WP 321-321H; ASTM / ASME A403 WP 347-347HAlloy သံမဏိ: ASTM / ASME A234 WP1-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91-WP911 ASTM A860 WPHY42 WPHY46 WPHY46 WPHY46
စံ: ASTM B16.9 ASTM B16.28 / JIS B2311 / DIN 2605 / EN10253 / BS / GB / GOST
ပုံစံ: Tee (ဖြောင့်။ လျှော့ချ); တံတောင်ဆစ် (၄၅/၉၀/၁၈ ဒီဂရီ); Reducer (Concentric နှင့် Excentric); Cap
မျက်နှာပြင် အနက်ရောင်သုတ်ဆေး၊ သံချေးဆီကာကွယ်ခြင်း၊
နံရံအထူ: Sch5 Sch10 Sch20 Sch30 Sch40 STD XS Sch60 Sch80 Sch100 Sch120 Sch140 Sch160 XXS
အရွယ်အစား: 1/2” - ၄၈” (DN15-DN1200)
အသိအမှတ်ပြု ISO9001 CIQ ၎င်း၏ SGS BV CCIC
လျှောက်လွှာ ဓာတု၊ စွမ်းအင်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သတ္တုဗေဒ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး၊
ထုပ်ပိုး: ပုံးများတွင် / သစ်သားကိစ္စများတွင် / သစ်သား pallets ၌တည်၏။
ပစ္စည်းပို့မည့်အချိန်: ငွေသွင်းပြီးနောက်ရက် ၃၀ အတွင်း
အဓိကစျေးကွက်: ယူကရိန်း၊ ရုရှား၊ မက္ကစီကို၊ ကနေဒါ၊ ချီလီ၊ ယူကွေဒေါ၊ ဘရစ္စလာ၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ စင်ကာပူ၊ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ယူအေအီး၊
Din St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8 ။
စံ ASTM / JIS / DIN / BS / GB / GOST
ပုံစံ 1.Tee (ဖြောင့်ခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်း) 2.180 DEG သို့ပြန်သွားသည်
တံတောင်ဆစ်ဒီဂရီ 45 ဒီဂရီ, 90 ဒီဂရီ, 180 ဒီဂရီ
မျက်နှာပြင် အနက်ရောင်သုတ်ဆေး၊ သံချေးဆီကာကွယ်ဆေး၊
နံရံအထူ SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60,
ပုံသဏ္.ာန် တူညီ, လျှော့ချ
လျှောက်လွှာ ရေနံ၊ ဓာတု၊ စွမ်းအင်၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ သတ္တုဗေဒ၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးစသည်
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ ၁။ ကာဗွန်သံမဏိနို့သီးခေါင်းနှင့်ခြေစွပ် ၂။ အနားကွပ်
၃။ သံပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း ၄
5. High- ဖိအား fittings ၆
7. PTFE .thread တံဆိပျတိပ် ၈
၉။ သံမဏိပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း 10. ကြေးနီ fittings
11. သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, ။ 12. Grooved fittings
Package ပုံးထဲမှာ 1> 1/2 "- 2" ။
2> အထက်2wooden သစ်သားကိစ္စများတွင်။
ကြီးမားသောအရွယ်အစားကို pallets ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
နမူနာများ အခမဲ့နမူနာ, ဒါပေမယ့်ဝယ်သူအမြန်စွဲချက်ပေးဆောင်
Annel အရောင်း: တစ်နှစ်လျှင် 150-200 ကွန်တိန်နာ
ရောင်းပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးသည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟုတွေ့ရှိပါကနှစ်ဝက်အတွင်းငွေပေးချေမှုကိုပြန်အမ်းမည်
ကုမ္ပဏီ ၀ န်ထမ်းများ - ကုမ္ပဏီအား ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အလုပ်သမား ၃၀၀၊ အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာ ၂၀၊ အကြီးတန်းပညာရှင် ၅၀၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု ၀ န်ထမ်း ၂၀ နှင့်ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှု ၀ န်ထမ်း ၂၀ ရှိသည်။
အရောင်းအချိုး: ပို့ကုန် ၇၀%၊ ပြည်တွင်းရောင်းအား ၃၀%
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ် SZ တစ်ချိန်တည်းမှာသင်သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်အနည်းဆုံးအော်ဒါမှာယူမှုမှာအနည်းဆုံး ၁၀ တန်ဖြစ်ပြီး၊ မှိုဖွင့်ခကိုကောက်ခံပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပို့မှုပမာဏသည်ကွန်တိန်နာ ၅ ခုသို့ရောက်ရှိပြီးမှိုအဖွင့်အခကိုပြန်ပေးသည်
ရှေ့သို့ Galvanzied သံမဏိပိုက်